Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.10 Sensible
Ny sasany tamin'ireo vaovao ireo orinasa sy ny governemanta izay manana dia saro-pady.
Ny orinasa fiantohana ara-pahasalamana dia manana fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fitsaboana omen'ny mpanjifany Ity fampahalalana ity dia azo ampiasaina mba hanaovana fikarohana manan-danja momba ny fahasalamana, fa raha lasa olom-bitsy, dia mety hitarika ho amin'ny fahasemporana ara-pihetseham-po (ohatra, manalefaka) na faharatsiam-bola (ohatra ny fahaverezan'ny asa). Loharanom-baovao maromaro hafa koa dia manana fampahalalana izay mahatsikaritra , izay anisan'ny antony mahatonga azy ireo tsy azo idirana.
Indrisy anefa fa lasa sarotra ny manapa-kevitra hoe inona marina ny fampahalalam-baovao marina (Ohm 2015) , araka izay asehon'ny loka Netflix. Araka izay ambarako ao amin'ny toko faha-5, tamin'ny taona 2006, i Netflix dia nandefa fanamafisam-peo 100 tapitrisa izay nomen'ireo mpikambana 500.000 teo ho eo ary nanana antso an-kalalahana izay nanoloran'ny olona manerana izao tontolo izao algorithm izay afaka manatsara ny fahaiza-manaon'i Netflix hanolotra soso-kevitra. Talohan'ny namoahana ny angon-drakitra, i Netflix dia nanaisotra ny mombamomba azy manokana, toy ny anarana. Saingy, tapa-bolana taorian'ny nanesorana ny angona, Arvind Narayanan sy Vitaly Shmatikov (2008) nampiseho fa azo atao ny mianatra momba ny sarimihetsika ho an'ny olona manokana amin'ny fampisehoana izay hampisehoako anao ao amin'ny toko faha-6. Na dia nisy nanafika aza nahita ny sarimihetsika ho an'ny olona, ​​mbola toa tsy misy zavatra mahasosotra eto. Na izany aza dia mety amin'ny ankapobeny izany, satria farafaharatsiny ny sasany amin'ireo olona 500.000 ao anatin'ilay daty, ny fahatsiarovan'ny sarimihetsika dia mahatsiaro tena. Raha ny marina, ho setrin'ny famoahana sy famerenana ny angon-drakitra ny angon-drakitra, dia nisy vehivavy maditra vehivavy iray voasintona nanatevin-daharana ny adihevitra momba ny kilasy tamin'i Netflix. Toy izao ny fomba nanehoana ilay olana tamin'ity raharaha ity (Singel 2009) :
"[M] ovie sy ny tahirin-tsarimihetsika dia misy fampahalalana momba ny ... toetra manokana sy mahatsikaiky. Ny tahirin-tsarin'ny mpikambana ao amin'ny sarimihetsika dia mampiseho ny tombontsoa manokana sy / na ady ataon'ny Netflix amin'ny olana maro samihafa, anisan'izany ny firaisana ara-nofo, ny aretina ara-tsaina, ny fialana amin'ny fisotroan-toaka, ary ny fanavakavahana, ny fanararaotana ara-batana, ny herisetra an-tokantrano, ny fanitsakitsaham-bady ary ny fanolanana. "
Ity ohatra ity dia mampiseho fa mety hisy ny fampahalalana izay heverin'ny sasany ho mahitsy ao anatin'izany izay mety ho tahiry tsara tarehy. Ankoatra izany, dia mampiseho fa ny fiarovana lehibe izay ampiasain'ny mpikaroka mba hiarovana ny angon-drakitra mafonja-ny-famantarana-dia mety tsy hahomby amin'ny fomba mahagaga. Ireo hevitra roa ireo dia novolavolaina tamin'ny antsipiriany ao amin'ny toko faha-6.
Ny zavatra farany tokony hotadidintsika momba ny angona azo antoka dia ny fanangonana azy tsy misy fankatoavan'ny vahoaka dia mametraka fanontaniana etsy sy eroa, na dia tsy misy vokany manokana aza. Ny ankabeazan'ny olona mijery ny dite tsy misy ny fanekena dia mety ho heverina ho fanitsakitsahana ny tsiambaratelon'io olona io, ka hanangona vaovao mafonja - ary tsarovy fa sarotra ny manapa-kevitra hoe inona no mahatsikaritra, ary tsy misy ny fanekena dia miteraka ahiahy momba ny fiainana manokana. Hiverina any amin'ny fanontaniana momba ny fiainana manokana aho ao amin'ny toko faha-6.
Ho famintinana, ny loharanom-baovao goavana, toy ny firaketan'ny governemanta sy ny birao ara-panjakana, dia tsy noforonina ho an'ny tanjona ara-tsosialy. Ireo loharanom-baovao lehibe anio, ary mety rahampitso, dia manana toetra 10. Maro amin'ireo fananana izay heverina ho tsara ho an'ny fikarohana - lehibe, mitohy, ary tsy mivoatra - avy amin'ny zava-misy ao amin'ny orinasa nomerika dizitaly ary ny governemanta dia afaka manangona tahiry amin'ny ambaratonga izay tsy azo tanterahina teo aloha. Ary maro amin'ireo toetra izay heverina ho ratsy ho an'ny fikarohana - tsy feno, tsy azo idirana, tsy mavitrika, manodinkodina, algorithmika manga, tsy azo idirana, maloto, ary marefo - avy amin'ny hoe tsy nangonina avy amin'ireo mpikaroka ny mpikaroka ireo tahiry ireo. Hatreto, miresaka momba ny angonin'ny governemanta sy ny orinasa aho, saingy misy fahasamihafana eo amin'ny roa. Raha ny zava-misy iainako, ny tahirin-kevitry ny governemanta dia midika fa tsy dia mipoitra ny antontam-baovao, tsy dia mampihetsi-po loatra ny algorithmika, ary tsy dia mampihetsi-po loatra. Etsy andaniny, ny raharaham-panjakana misahana ny raharaham-barotra dia mitombo hatrany hatrany. Ny fahatakarana ireo toetra 10 ankapobeny ireo dia dingana voalohany manampy amin'ny fianarana amin'ny loharano lehibe. Ary ankehitriny dia mitodika amin'ny paikady fikarohana izay azontsika ampiasaina miaraka amin'ity angon-drakitra ity.